FJKM Ambohimanjaka Fiorenana, Fokotany Ambohimanjaka, Antananarivo (2019)
Home > Madagascar > Antananarivo > Places Of Worship > FJKM Ambohimanjaka Fiorenana
Rue Dr Rajaonah, Ankadifotsy
Eglise Evangélique de Réveil de Madagascar
Mission: Fitoriana ny filazantsara dia i Jesoa Kristy amin'ny olombelona rehetra
unmiraclechaquejour.topchretien.com Bonjour Mon ami(e), Comment Dieu fait-il pour aimer en même temps, plus de sept milliards d’êtres humains sur terre, et en prendre soin...? Peut-il vraiment vous aimer, vous personnellement, Mon ami(e)...? Un jour, alors que nous allions être cinq enfants dans la famille, j’ai demandé à ma ...
Fantaro fa fotoana fanaovaozana izao eo @ sahan'ny FJKM.
Amin'ity enim-bolana voalohany ity no hatao ny antsika Ambohimanjaka Fiorenana
- Fifidianana diakona (ambanivohitra + zanaka am-pielezana)
- Biraon'ny fiangonana, biraon'ny zanaka am-pielezana
- Biraon'ny sampana rehetra (AFF, Dorkasy, Lehilahy Kristiana, STK, Vovoko Manga, Rantsana fanantenana, Sport, Taninketsa, Sekoly Alahady, Lehilahy ZAAF, Vehivavy ZAAF, Tanora ZAAF, Ankizy ZAAF)
Koa entanina isika diakona mba handefa ireo lisitry ny mpandray fanasan'ny Tompo isan-tanàna mba hanaovana "mise à jour". Ireo izay vao nifindra, vao avy noraisina mpandray vao haingana, ireo vinanto, sns
Toy izany koa, angatahana ny tompon'andraikitry ny sampana velona rehetra mba hanao "mise à jour" ny lisitry ny mpikambana ao aminy, satria dia ianareo ao anatin'ny sampana ihany no hifidy izay hitarika anareo.
Noho izany, dia tsy zavatra kely akory izao fanavaozana hantrehintsika izao fa miantoka ny asan'ny fiangonana manontolo mandritry ny 4 taona manaraka.
Koa manana adidy ny tsirairay mba hanao ny anjara asany amin'ny vavaka sy ny fifidianana.
Mitondrà teny soa mahafaly ary manamasina fiainana ho an'ny Tompo
"Isika tsy maintsy manao ny asan'Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona." Jao 9:4
Ny mpitandrina mivady, ny biraon'ny fiangonana, ny biraon'ny zanaka am-pielezana, ny biraon'ny fisotroan-dronono, ny sampana rehetra dia tena faly mankasitraka antsika rehetra tonga nanatrika ny fihaonam-ben'ny #zanaka am-pielezana #Ambohimanjaka #fiorenana teny @ #Espace Jeanni Sovinimierina ny 03 Febroary teo.
Andriamanitra Raintsika, Tompon'ny zavatra rehetra, hampamirapiratra ny tavany hatrany @ ankohonana izay misy anao
Ny seraseran'ny fiangonana
Perikopa FJKM Febroary 2019
Aoka tsy ho adinontsika fa nahemotra ny 03 Feb. ilay fihaonam-be zanaka am-pielezana Ambohimanjaka. Sao misy tonga any rahampitso!
2019, ho taonan'ny fankatoavana an' Andriamanitra tokoa anie
[12/27/18] Mbola tsara sy azon'ny fiara kely andehanana tsara ny làlana makany ambanivohitra (Ambohimanjaka, Ambohibary, Antanifotsy) hatramin'izao ho an'izay te hamonjy ireo fotoana lehibe ato ho ato:
- 30 desambra: faha-30 taona naha mpitandrina
- 30 desambra: fifamelan-keloka sy fiaraha-misakafo ao am-piangonana
- 31 desambra: Reveillon
- 01 Janoary 2019: taom-baovao
- 06 Alahadin'ny taom-baovao: misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo
Alahady 30 desambra 2018:
Sady fankalazàna ny faha-30 taona naha mpitandrina an'i RANDRIAMALALA Emmanuel mivady (4 taona tany Sainte Marie ary 26 taona teto Ambohimanjaka Fiorenana) no fotoana lehibe ho fifamelan-keloka
Farànana @ fiara-misakafo izany, mitondrà fitaovam-pihinanana sakafo
Misy fiara iraisana miainga @ 7:00 maraina io andro io, eo akaikin'ny Sainte Antoine Ambodivona
Toy izao no fivoaran'ny asa fanaovana fiangonana tany Miakara Mahanoro tao aorian'ny asa natao ny 6-7-8-9 Desambra 2018 teo.
Efa nampitaina teto ihany moa fa misy io asa fanamboarana fiangonana io miandry ny fiangonantsika Ambohimanjaka Fiorenana, ka rariny raha omena vaovao hatrany isika.
Hatreo amin'io sary faha-3 io no vita hatreto. Araka ny vinavina dia mila eo @ 2 tapitrisa Ariary eo hamitana ny tafo rehetra (tafo miloko sy ny tapenaka). Arak'izany dia mbola mitohy ny fitadiavana ny hoentimanana amin'izany, koa raha misy azonao atao dia ataovy izany ho an'ny filazantsara.
Marihina fa ny varavarana dia efa vonona any (varavarana hazon'ny akanintsika taloha no nalefa tany)
Misaotra ny mpanohana am-bavaka, ara-pitaovana, ara-bola, ara-teknika rehetra tsy an-kanavaka.
Tsy adino ihany koa ireo olona 21 mianadahy nanolotena nandeha [email protected] io fotoana io
Voavangy nandritra io fotoana io ihany ny fiangonana tany #Menagisa, #Tsangambato
Ho voninahitr' Andriamanitra irery ihany,
Efa miparitaka eny @ Librairie Chrétienne Saotratia Antaninandro, Librairie Antso Analakely, Librairie Avotra Tsaralalàna sahady ny Gazety Solika Fitaiza volana Janoary 2019, "MAHATAHOTRA ANDRIAMANITRA TOMPO".
"raha Ray aho, aiza izay hajako ? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy ? hoy Jehovah Tompon’ny maro"
#Mahatahotra #Andriamanitra #Tompo #janvier #2019
_ 06 Janoary: IZA NO ATAHORANAO : OLONA SA ANDRIAMANITRA ? Matio.10 :26-33
1) Ambarao amin-tahotra ny vaovao mahafaly namonjena anao
2) Satria manambara vaovao mahafaly ianao, aza matahotra izay te hamono anao
3) Sarobidy ny fahavelomanao, tanteraho ny fanompoanao
_ 13 Janoary: JIOLAHY AZA TONGA TANY PARADISA ! ARY IANAO MBA HO AIZA ? Lio.23 :39-43
1) Tsy ny mpanota mivavaka rehetra akory dia ho any amin’ny Paradisa avokoa.
2) Aza gaga ! mety ho tonga any Paradisa ny dahalo
3) Voaheloky ny fitsaran’ny tany saingy voavela heloka tamin’ny ftisaran’ Andriamanitra
_ 20 Janoary: TONGA ZANAK’OLONA ILAY ZANAK’ ANDRIAMANITRA MBA HAMONJY ANTSIKA / Mar.9 :2-8
1) Ataony mahalala ny maha Andriamanira Azy izay manaradia Azy
2) Efa tamin’ny andron’i Mosesy sy ny mpaminany no nilazana ny famonjena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy
3) Koa Ilay anakasitrahan’ Andriamanitra no aoka henoinareo
_27 Janoary: NY MPANOMPON’ ANDRIAMANITRA INDRAY NO MANAMAVO NY ANARANY MASINA ! NAHOANA ? / Mal.1 :6-9
1) Mifanohitra amin’izay tenenina ny atao
2) Fanatitra maloto no omena Azy
3) Andeha mifona amin’ Andriamanitra
Alahadin'ny mpitandrina aty amin'ny zanaka am-pielezana, Kolejy RAINANDRIAMAMPANDRY Ankadifotsy, manomboka @ 9:00 ny fotoana
Gazety volana desambra 2018
Hivoaka tsy ho ela ihany koa ny gazety Janoary 2019
Nanomboka ny desambra 2018 teo dia azonao jifaina ao amin'ny #librairie Librairie Chrétienne Saotratia Antaninandro ihany koa ny Gazety Solika Fitaiza (eo ambonikelin'ny FJKM Andravoahangy Fivavahana)
#Mifalia amin'ny #Fitiavan'ny #Tompo
#Perikopa #Desambra #2018 #Toriteny #FJKM
_ 02 Desambra:
IZA NO MANAM-PIFALIANA TSY RESIN’NY FAHORIANA ? / Rom.8 :14-18
1) Izay natsangan’Andriamanitra no zanany
2) Izay tarihin’ny Fanahy Masina
3) Izay mpandova an’Andriamanitra
_ 09 Desambra:
TE HANDRAY NY FITAHIANA MARINA AVY AMIN’ ANDRIAMANITRA IANAO ? Joela.2 :21-27
1) Miverèna ho tena olon’ Andriamanitra
2) Miaràha monina amin’ Andriamanitra
3) Tonga ny fitahiana marina avy amin’ Andriamanitra
_ 16 Desambra
JEREO AMIN’NY LAFITSARANY NY ZAVATRA REHETRA / Fil.1 :12-18
1) Tsy voafatotra ny filazantsara
2) Famatorana niteraka fahasahiana
3) Amin’ny atao rehetra dia Kristy no torina
_ 23 Desambra
IZAY MAHATOKY NY FITIAVAN’ ANDRIAMANITRA AZY DIA : (1 Tes.5 :12-18)
1) Manana fiainam-pifaliana
2) Manana fiainam-bavaka
3) Feno fankasitrahana
_ 25 Desambra
HO AN’NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA / Mat.2 :6-12
1) Hitan’ Andriamanitra ao anatin’ny maro ianao
2) Mtarika anao hahita ny Mpamonjy Izy
3) Aza lavina ny fitiavany Anao.
_ 30 Desambra
AO AMIN’NY TOMPO ! MISY LOHARANOM-PIFALIANA / Fil.4 :1-9
1) Fifaliana avy amin’ny rahalahy mitoetr tsara
2) Ffaliana avy amin’ny fiainam-bavaka
3) Fifaliana eo am-pikatsahana ny tsara indrindra
"Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny, dia ny any an-danitra; ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny, satria efa namboatra tanàna ho an'ireo Izy." Heb 11:6
Alahadin'ny Mpitandrina (25 taona teo Ambohimanjaka)
Ny 02 desambra izao ao Ambohimanjaka Fiorenana @ 9:00, fiara Soloprix @ 7:00 maraina, saran-dalana mora dia mora 2.000 ar mandroso sy miverina
- Mitarika fotoana: Filohan'ny Komity Fisontrondronon'ny Mpitandrina
- Mitoriteny: Pasitera John (Korea Antsimo)
Ny 23 desambra ao @ Kolejy RAINANDRIAMAMPANDRY Ankadifotsy, manomboka @ 9:00 marain
Aoka isika hifanotrona hanome voninahitra an'Andriamanitra, mainka indrindra amin'izao alahadin'ny mpitandrina FARANY iarahana amin'izy ireo izao.
Ambohimanjaka Fiorenana, Novambra 2018
Finaritra indrindra e,
Ny fiadanan'i Kristy tsy takatry ny saina hiaro ny fontsika sy ny fanahintsika.
Ny Sampana Ankizy ato @ Zanaka am-pielazana no mitarika fotoana ny alahady 25 novambra ho avy izao, ao @ Kolejy Rainandriamampandry Ankadifotsy, miditra @ 9:00
Tongava e, aza adino ho ento ny ankizy, fotoana indray mandeha isan-taona ho an'ny ankizy io, ary tena hiavaka tokoa
Lazalazao ny fianakaviana rehetra mba ho tonga hiara-hanome voninahitra ilay Raintsika tian antsika
Toriteny ny 14-10-2018
MANAN-KARENA FITIAVANA IZAY MANANA FIAINANA MANDRAKIZAY ( Lio.10:25-37)
1) Tsy minia mikipy manoloana ireo tra-boina
2) Porofoin’ny asa ny fitiavana
3) Tsy asa zara fa vita na vonjy tavan’andro
Faly izahay mampahafantatra antsika fa 100% (zato isan-jato) ny valin'ny fanadinana CEPE sy BEPC2nde teo @ Collège FJKM Ambohimanjaka Fiorenana.
Isaorana lehibe Andriamanitra noho izany vokatra tena tsara izany, eny na dia iaraha mahalala aza ny olana teo anivon'ny fampianarana tamin'ity taona ity. Isaorana ny mpitandrina mivady, ny biraom-piangonana, ny tale sy ny mpampianatra mpiara-miasa aminy rehetra, ny ray aman-dreny nanaiky nampianatra ny zanany tao @ sekoly, isika mpianatra rehetra nikely aina nanao izay ahatafita. Ny fehiny dia hoe: "Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, manana ny lanana iheverana antsika tokoa Izy dia mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza" (Jre.29:11)
- CEPE: 20 @ 20 no afaka
- BEPC: 24 @ 24 no afaka, ary dia nahazo ny volohany niditra ho classe de seconde ihany koa (naoty ambony indrindra)
Mirary soa ho an'ny taom-pianarana manaraka. Aza misalasala mangataka fanazavana fanampiny raha ilaina.
Araka ny fanentanana maro isan-karazany natao teto amin'ny pejy dia nanatontosa ny iray volana fankasitrahan'ny taranaka ny FJKM Ambohimanjaka Fiorenana ny volana Aogositra iray manontolo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa noho ny famindram-pony dia tanteraka soa aman-tsara izany, voninahitra ho azy irery ihany. Amen!
Isaorana koa isika rehetra tonga nifanotrona tany an-tanindrazana nandritra izany fotoana izany, mainka moa fa ianareo nitondra am-bavaka. Misaotra indrindra fa tena notanterahinareo tokoa ilay tenin'Andriamanitra hoe: "Aza mety ho resin'ny ratsy ianareo, fa reseo amin'ny soa ny ratsy" - Rom.12:21b. Izy Andriamanitra izay tsy mahay mandainga hamaly soa antsika tsirairay avy.
Isaorana ihany koa ny Mpitandrina mivady, ny biraon'ny fiangonana, ny diakona rehetra, ny sampana rehetra, ireo tompon'andraikitra maro tsy ho voatanisa tamin'ny fikelezan'aina tamin'ny asa nampanaovin'ny Tompontsika.
Hatreto ary dia mitentina 8 286 810,00 Ar
na 41 434 050,00 fr. ny totalin'ny vola azo.
Araka ny efa nambara hatramin'ny volohany dia natao hanampiana ny adidy kitapo iombonana (adidy aloha isan-taona any @ foibe FJKM)
Marihina fa niakatra ho 80% ny adidintsika, raha toa ka ny vokatra Paska sy Pentekosta no nanenjehana izany taloha.
Ny anton'ny nampiakatra ny adidy dia fandaminana avy amin'ny foibe (miankina amina antony maro toy ny isan'ny mpandray fanasan'ny tompo, sns ...)
Raha toa ka mila fanazavana fanampiny, dia afaka miantso ny tompon'Andraikitra: 033 14 496 24 na 033 11 392 19 na 033 07 285 84
Mamerina ny fisaorana hatrany ho antsika rehetra tsy ankavaka.
" Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no ankasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany.
" 2 Kor.8:12
[08/31/18] Famaranana ny iray volan'ny fankasitrahan'ny taranaka @Alahady izao, sady Fandraisana
J-2 ho an'ny terak'Ambohibary, Antanifotsy, Andafiatsimo. "Aza mety ho resin'ny ratsy ianareo, fa reseo amin'ny soa ny ratsy" - Romana.12:21
"#Mitsangàna hanohitra ny #herisetra" - (#firenena, #fianakaviana, #fanjakana, #ankohonana, #fiangonana, #toerampiasana)
Hitanao eny @ #librairie #Antso Analakely, #Avotra Tsaralalàna, Saotratia Antaninandro (akaikin'ny FJKM Andravoahangy Fivavahana)
Efa misy versio CD Audio (mp3) ity gazety volana aogositra ity
#SolikaFitaiza, #Solika #Fitaiza, #FJKM, #Toriteny
"MITSANGANA HANOHITRA NY #HERISETRA" - #Perikopa #FJKM Aogositra 2018
- 05 Août 2018 : Raha toherina ny #fahamarinana: inona no hatao? (Mat.6:47-56)
- 12 Août 2018: Iza no afaka handresy ny fahavalony? (Rom.12:17-21)
- 19 Août 2018: Rehefa mahazo vahana ny mpanao ratsy (Mpits.19:22-30)
- 26 Août 2018: Raha tsy tianao ny hitoeran'ny fahatezeran'Andriamanitra sy alahelon'olona aminao (1 Mpan.21:7-9)
"Tamin'ny taona fankasitrahana no nihainoako anao" II Kor 6:2.
Fankasitrahan'ny taranaka (iray volan'ny taranaka) taona 2018. Fotoana ahafahan'ny taranaka indray miara-mivavaka, midera, mankasitraka an'Andriamanitra any ambanivohitra mandritry ny volana Aogositra.
Ny tanjona izay ho tratrarina amin'ity taona ity dia ny fanatevenana ny adidy kitapo imbonana, izay niakatra ho 80 isan-janto (80%) nanomboka tamin'ity taona ity.
Ao anatin'ny fanompoam-pivavahana no hitondrana am-bavaka sy handraisan-tànana ny taranaka rehetra miroso eny aloha eny @ alitara hanolotra ny valopy fankasitrahan'ny taranaka.
Manomboka @ 9:00 ny fanompoam-pivavahana, misy fiara iraisana miainga eny @ ex-Soloprix Andravoahangy isaky ny alahady mandritry ny volana Aogositra sy ny fandraisana volana septambra. Misy sakafo isan-karazany (tsakitaky, vary sy laoka; kafe sy mofo) amidy any an-toerana.
Ny folak'andro dia manomana fety sy seho miavaka ny isan-taranaka
Tongava, ary aza adino ny fiarahantsika miangona (mivavaka).
Efa mandroso ny fanamboarana ny làlana eo Ambohimanjaka mba ahafahan'ny karazana fiara rehetra mifamezivezy
Ny seraseran'ny fiangonana dia misaotra anao manokana mampita izao fandaharam-potoana izao amin'ny hafa
Manasa antsika rehetra hanatrika ny seho izay ataon'ny Zanaka Mpitandrina FJKM Antananarivo sy ny manodidina ny Alahady 22 Jolay 2018 @ 3 ora tolakandro eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana.
Izany no natao dia ho fiomanana amin'ny fihaonamben'ny Zanaka Mpitandrina FJKM manerana an'i Madagasikara ny Volana Septambra 2018.
Ho antsika izay te aharaka ny fandaharam-potoan'Ambohimanjaka Fiorenana amin'ny SMS dia iangaviana mba handefa ny numero ahazoana anao ao @ MP (mety foana na Airtel na Telma na Orange)
Hijanona ho an'ny seraseran'ny fiangonana ihany ny larahan'ny fiadainao fa tsy ho amparitaka akory.
Marihina fa efa nandeha hatramin'ny ela ny fampitana vaovao amin'ny alalan'ny SMS.
"Fa raha misy te hirehareha,
dia aoka izy hirehareha
ho afaka mahafantatra Ahy
sy mahalala fa Izaho TOMPO,
dia mampihatra ny hatsaram-po
ary ny rariny sy ny hitsiny eto an-tany.
Eny, ny olona toy ireny no sitrako"- Jeremia.9:23 Diem
Mba ho fanatsarana sy fandaminana dia nasiana laharana (numéro) amatarana azy ny Gazety Solika Fitaiza "Edition spéciale". Hatreto dia laharana manokana hatramin'ny 52 (roa amby dimapolo) no efa nivoaka.
001 Famadihana 1
002 Famadihana 2
003 Famadihana 3
004 Famadihana 4
005 Famadihana 5
006 Ady amin'i Satana, tsy sangisangy fa tena izy
007 Ankizy sy tanora mora idiran'ny demonia
008 Famoahana demonia, ary ara-panahy
009 Maninona no manam-pahefana amin'ny kristiana Satana?
010 Ny fidiran'ny demonia
011 Ny herin'ny vavaka
012 Tsy mahazo valim-bavaka aho, fa maninona?
013 Fanalahidin'ny valim-bavaka
014 Fiovam-po 1
015 Fiovam-po 2
016 Hatao Batisa ny zanako
017 Ny Batisa asitrika anaty rano ihany ve no marina?
018 Ny Tompo mamonjy ireo voafatotry ny sary vetaveta
019 Fahotana ve ny manao sipa 1 ?
020 Fahotana ve ny manao sipa 2 ?
021 Fahotana ve ny manao sipa 3 ?
022 14 Février, sao fifankatiavana teren'ny fety?
023 Ry tovovavy mitandrema, mirongatra ny fanolanana
024 Ry tanora, safidy diso miantraika amin'ny taranaka faramandimby
025 Iza no ho vadiko?
026 Mpifamofo izahay
027 Hiroso amin'ny fanamasinana fanambadiana izahay
028 Ny fifaneken'ny mpivady
029 Kristiana manambady tsy mino
030 Ny vehivavy tsy hendry mandrava ny toka-tranony
031 Ny fahedren'ny vehivavy no mahamafy ny toka-trano
032 Toriteny azo atao amin'ny fahoriana
033 Nivavaka mba ho sitrana! Tsia nefa ny valiny
034 Hendry araka ny Soratra Masina, iza?
035 Fifamelan-keloka, tena ilaina nefa tsy mety vita
036 Tsy hihinana henakisoa intsony aho!
037 Ho Kristiana manan-karena sady mampanana ny hafa
038 Hanasitrana ny taniny aho, ahoana no ahatanteraka izany eto Madagasikara
039 Ry mpitondra fanjakana, miteny aminareo Andriamanitra
040 Iza no azo fidiana ho diakona?
041 Ny toetr'izay ho diakona
042 Arahaba nahatratra ny fitsingerenan'ny taona nahaterahana
043 Sarobidy ny fahavelomanao nefa miomana amin'ny fahafatesanao
044 Ho mpandray ny fanasan'ny Tompo aho 1
045 Ho mpandray ny fanasan'ny Tompo aho 2
046 Fanomezam-pahasoavana miara-miasa ao amin'ny fiangonana
047 Izay andrasana amin'ny tompon'andraikitry ny fiangonana
048 Ny fiangonana mandroso
049 Paik'ady fitoriana filazantsara 1
050 Paik'ady fitoriana filazantsara 2
051 Paik'ady fitoriana filazantsara 3
052 Paik'ady fitoriana filazantsara 4